यीनीहरु अहिले पनि भुलभुलैयाको जिन्दगीमा छन् । यीनीहरुले समाजलाई नियालिरहेको छ र यीनै समाजले यीनीहरुलाई बहिष्कार गरी सभ्य समाज निर्माणमा, सँस्कृति, धर्म, सँस्कार जगेर्नाको लागि कदम उठाउने छ ।
रति ८:३३ बजे
बलिवुडमा एक हिन्दी फिल्म छ– 'द डर्टी पिक्चर- The Dirty Picture' जो की चर्चित अभिनेत्री विद्या बालनद्धारा अभिनित छ । त्यो फिल्ममा एक गाउँकी किशोरी विद्यावालन (शिल्क) लाई आकाश चुम्ने सपना पलाउँछ, फिल्मी जगतमा गएर सबभन्दा चर्चित महिलाको रुपमा नाम कमाउने सपना बोकेर फिल्मी दुनियाँमा पस्छिन् ।
त्यो फिल्ममा विद्यावालनको नाम शिल्क हुन्छ । फिल्मी दुनियाँमा उनले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन चाहिन्छन र एक बाटो रोज्छिन, जो की अन्त्यमा उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ ।
फिल्ममा विद्यावालन अर्थात शिल्कले समाजको लोकलाज, लज्जा, शरम, समाजको नीति नियमलाई तोडेर एकैपटक उडेर सफलता चुम्ने प्रयास गर्छिन र सफल पनि हुन्छिन्, तर जुन समाजमा उनले नाम कमाउन खोज्छिन त्यही समाजले उनलाई घृणा गर्न थालेपछि उनले समाजको नीति नियम, लोकलाजलाई उलंघन गरेर सफलता पाएको महसुस गर्छिन र अन्त्यमा उनको सफलता, नाम, दाम केही काम नआउने भएपछि आत्महत्या गर्छिन् ।
हामीलाई यही समाजले वाहवाही दिएपछि आफू सफल भएको महसुस हुन्छ । यही समाजमा फेमस हुने खोज्छन्, तर त्यही समाजको नियमलाई तोडेर फेमस हुन खोज्यो भने अन्त्यमा आत्महत्याको शिवाय कुनै विकल्प रहदैनन् ।
केही महिना अगाडी दिपावलीकै दिन धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ यदुकूहास्थित एक किशोरी टिकटक बनाइरहँदा उनको वुवाले हप्काएपछि आत्महत्या गरिन् । यो यस्तो पहिलो घटना होइनन् ।
अहिले टिकटक प्लेटफार्म पनि ठयाक्कै द डर्टी पिक्चरझै बनेको देख्न सकिन्छ । त्यो डर्टी पिक्चरका नक्कली अभिनेता अभिनेत्रीहरुलाई नाम कमाउने र चर्चित हुने यस्तो होडबाजी चलेको छ की समाजले नै पचाउन नसक्ने गरी दृश्यहरु खिचेर अपलोड गर्ने गरेको छ ।
झन, त्यसमा प्रयोग गरिने शब्द, दिइने एक्सप्रेसनले त पश्चिमी मुलुक (विदेशी) हरुलाई पनि लाज लाग्छ । टिकटक एप खोल्ने वित्तिकै विभिन्न रँगको भिडियोहरु हेर्न पाईन्छ । विशेष गरी तराई मधेश मूलकी किशोरी, युवति, महिला, किशोर, युवक र पुरुषहरुको होडबाजी हेर्ने हो भने यीनीहरुको भविष्य के होलान भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
हुनतः सबैलाई आफ्नो स्वतन्त्रता छ, तर स्वतन्त्रताको नाममा समाजले नै पचाउन नसक्ने क्रियाकलाप त गर्नु भएन नी ।
केही दिन अघि सरस्वति पूजाको दिन देशको राजधानी काठमान्डौंमा जनकपुरकी एक चेलीले भोगेको दुर-व्यवहारको खुवै चर्चा भयो । खासमा त्यो व्यवहार उनलाई कसैले गरेको होईनन, उनले आफैंले निम्त्याएको एक दृश्य थियो ।
ती चेलीलाई टिकटकमा फेमस हुने यतिको बुखार चढेको देखियो की जे पनि गर्न तयार हुने होडबाजीको शिकार भइन् । काठमान्डौंको शान्तीनगरमा राखिएको ओरकेष्ट्रा कार्यक्रममा ती चेलीले पाएको सत्कार सायद उनले जीवनमा कहिल्यै विर्सन पाउदैनन् ।
#urajsingh26 @madhujaiswal650 @sunidhigauro_04x @shilparoy17
♬ original sound - PANKAJ SINGH
भिडियो हेर्नेलाई लाग्छ की उनलाई दुरव्यहार गरिएको छ । युवकहरुले उनलाई जबरदस्ती गरेको छ । तर, वास्तविकता परै छ । त्यो भिडियो जो देखिएको छ त्यो परिस्थिति उनले आफैँले निम्त्याएको परिस्थिति हो र त्यो भिडियो अझै पनि टिकटकमा छयाप्पछयाप्पी हेर्न सकिन्छ ।
उनले जानीबुझेर, आफूलाई नाकारात्मक हिसाबले देखाएर आफू फेमस हुन खोजेको टिकाटिप्पणी पनि आफ्नो ठाउँमा सहि जस्तै लाग्छ । तर, समाजले उसको चरित्रमाथि पनि प्रश्न तेर्सायो । किनभने उनले त्यहाँ त्यस्तो माहौलमा पनि उक्साएको भनेर टिप्पणी त्यतिकै गरिएको देखियो ।
भिडियोको टिप्पणी हेर्दा उनलाई यति मात्र भनिएको पाईयो–“तिमीलाई तिम्रो आमावुवाले पढनको लागि काठमान्डौं पठाएको छ, तर तिमी त अर्कै पढाई गरिरहेकी छौं ।”– यो एक मात्र टिप्पणी साभार छ, अन्य कति नाकारात्म टिकाटिप्पणी अझै रोकिएको छैनन् ।
किशोरीहरु अहिले पनि दिनभरि नै काठमान्डौंको विभिन्न ठाउँमा भिडियो सुट गरी टिकटक हाल्छिन् । वास्तविकता जे सुकै भएपनि कैयौं फिल्टर लगाएर उनीहरुले आफू डर्टी पिक्चरको शिल्क बन्ने दौडमा निस्केकी होइन भनेर भन्न मिल्दैन । वास्तविकताबाट पर्दा लगाएर पनि फेमस हुन खोज्दैछिन् । उनलाई लागिरहेको छ की उ फेमस पनि भयो, यद्यपी उनलाई हेर्ने नजरिया भने अझै नाकारात्मक छ ।
#guptadinbandu_04???????? #fly #viral @jaiswalmadhu0 #madhujaiswal0???? @dhonifan44
♬ original sound - BhojpuriyaActor
यहाँसम्म की आफैं नै कैयौं टिकटक आईडी बनाएर आफ्नो बडाई आफैं गर्ने, कसैबाट गर्न लगाउने, मधेशकी शेरनी हो भनेर भन्न लगाउने जस्ता केटाकेटीको ललिपाँप जस्तो कुराहरुमा मग्न देखिन्छन् ।
दिनभरिमा कैयौं भिडियो सुट गरी अपलोड गर्ने एक मात्र किशोरी मात्र होईनन्, अन्य धेरै किशोरी, युवतिहरु छन् जो की आफ्नो दैनिकी नै टिकटकलाई बनाएको देखिन्छ । एक घण्टामा ४ देखि ५ वटासम्म भिडियो हाल्नलाई उनीहरु दिनभरिको समय खर्चिने गरेको छ आफ्नो अध्ययन अध्ययापनलाई बिर्सेर ।
उनीहरुमा एक नयाँ उमँग देखिन्छ । किशोरीहरुमा चर्चा कमाउने, फेमस हुने होडबाजीले टिकटक प्लेटफार्म नै गन्दा बनाइदिएको अवस्था छ । टिकटकमा लाईक मात्र पाउनको लागि उनीहरुले जे पनि गर्छिन, जे पनि को अर्थ बुझन सक्नुहुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा टिकटक बन्द हुनुअघि एक चर्चित टिकटकरको से** भिडियो पनि टिकटकमै अपलोड गरिएको पाईयो । आफ्नो प्रेमीसँग गरेको यौनक्रिडासम्मको भिडियो राखेपछि अन्तत उनले पनि आत्हत्याको बाटो रोज्न पुगिन, यद्यपी विफल भईन ।
तराई मधेशकी केही किशोरीहरु जो की टिकटकमा अधिक सक्रिय देखिन्छन् उनीहरुले समाजलाई पाच्य नै नहुने खाले भिडियो कन्टेन्टहरु दैनिक रुपमा अपलोड गरी लाईक बटुल्ने गरिएको देखिएको छ । त्यति मात्र होईनन, फेमस र चर्चामा आउनकै लागि जिउँदै मान्छेलाई “रेस्ट ईन पिस” भनेर, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने गरेको विकृति बढदै गएको छ ।
#trending Rip @nivayadav88 #bivekbindash #bivekbindas @shailendrayadav0123
♬ original sound - Sunny Singh Rajput❤️ - Sunny Singh Rajput❤️
जसले टिकटक युजर्सहरुले उनको आईडी एक पटक हेर्छन, भिडियो हेर्छन र उनले सितैमा एक लाईक र भिउज पाएर दँग पर्छन् । भनेपछि, लाईक र भिउजको लागि जिउँदैलाई मार्नेलाई हत्या सरह हुन्छ । उनीहरुलाई खै त प्रशासनले निगरानी गरेको ?
टिकटकमा एक आईडी छ– त्यसमा एक ४० बर्षकी आईमाईले ५५ बर्षका बुढोसँग खुल्लेयाम चुम्बन गरी भिडियो अपलोड गरेकी छन् । हुनतः फलोवर पनि छ, तर गालीको बर्षातले उनलाई केही फरक पर्दैन् । उनलाई यो समाजको परिधी थाहा छैन की ओभरटेक गरेको भन्न सकिन्न् ।
♬ original sound - basant katel
अब माथि लेखिएको आधार बनाएर महिला अधिकारकर्मीहरु नारावाजी गर्न बेर लगाउँदैनन, यहाँसम्म भन्छ की हाम्रो स्वतन्त्रता हो । लौ, ठिक छ तपाईको स्वतन्त्रता हो भने एक युवकले अन्डरपैन्ट खोलेर तपाईसँग उभ्न चाहे उभिन पाउनुपर्ने उनको स्वतन्त्रता होईन त ? स्वतन्त्रताको नाममा समाजको नियमलाई उलँघन गर्न पाउने अधिकार कसैको छैनन् । यो हेक्का होस् ।
जँगल जस्तो ठाउँमा जनावरहरुले नियमको परिधीभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । जँगको पनि नियम छ भने हाम्रो समाजको नियमलाई नमान्ने ?
समाज परिवर्तन सबैले चाहन्छ, तर परिवर्तनको बाटो र सँस्कृतिलाई बदलेर होईन, सबैलाई आधुनिक बनाउन तर सँस्कार र सँस्कृति पुरानै राखेर पनि समाज परिवर्तन सम्भव छ । अब यो भन्दा कति परिवर्तनको आसा गर्ने हामी ?
"पहिला पहिला धनाढय, धनीमनी व्यक्तिहरुले गरिबकी छोरीहरुलाई स्टेजमा नचाउने गरिन्थयो, उनीहरु ओरकेष्ट्राबाली भनिन्थयो, तर, हेर्नु अहिले त्यही धनीकी छोरी, बुहारी, नातिनीले नाँगै भएर अँग प्रदर्शनसम्म गरेर अनलाईन ओरकेष्ट्रा नाच्दैछिन् । यो भन्दा अधिक परिवर्तनको कति आसा गर्ने ?"
टिकटकमा तराई मधेशकी किशोरीहरु, युवतिहरु मात्र होइनन देशको विभिन्न ठाउँबाट जे पायो त्यही हाल्ने, बाथरुमसम्मको भिडियो टिकटकमा हालेको पाइन्छ ।
केही दिन अघि जनकपुरको जानकी मन्दिर र विवाहमण्डमा एक किशोरीले खुल्लेयाम चुम्बन गरेको भिडियो हालेपछि उनको जीवनमा अहिले के भएको छ कसैले बुझने प्रयास पनि गरेको छैन् । उनीहरुले आफ्नो जीन्दगी आफैं बर्बाद पारेको हो । यी अनलाईन नचनीयाहरुको पनि सीमा हुनुपर्छ ।
टिकटकलाई एक महिनासम्म मैले अध्ययन गर्दा एउटै कुरा थाहा पाए–“यीनीहरु फेमस हुनको लागि जुनसुकै हदसम्म खस्न तयार छ, जे पनि गर्न तयार छ , यीनीहरुलाई भविष्यको साफै चिन्ता छैन् । यीनका आमावुवाहरुलाई थोरै थाहा छ, यीनीहरुले अभिभावकलाई चुतिया बनाएर राखेका छन् ।”
#trending #Kiranbaniya korfuta ????????????
♬ original sound - ???? Kiran Baniya ????
टिकटक प्लेटफार्म गलत होईन, त्यहाँ हेर्दा कति शैक्षिक समाग्री, मोटिभेसनल भिडियोहरु पर्याप्त हेर्न सकिन्छ, तर यी किशोरी नानीहरुको भिडियोले टिकटकलाई पनि बदनाम गरिदिएको छ ।
विशेष गरी दोहोरो अर्थ लाग्ने, नाँगैनँगा शब्दहरु भनेर भिडियो हाल्ने स्कूले किशोरीहरु बढी सक्रिय छन् । यीनीहरु लाईक, कमेन्ट र भिउजको लागि जे पनि गर्न तयार हुने देखिन्छन् ।
तर, यीनीहरुलाई यो मात्र थाहा छैन की टिकटक कम्पनीले कसलाई भाइरल गर्ने कसलाई नगर्ने भनेर निर्णय उत्तैबाट गर्छन् । कहिलेकाँही फेसबुकमा लाईक नै नगरेको पेज, व्यक्तिको पेज पनि अटोमेटिक लाईक भएको महसुस गर्नुभएको छ ? हो, टिकटक पनि यस्तै डाटा बेचेर फेक लाईक र फेक भिउज राखेर युवा युवति, किशोर किशोरीहरुलाई डाईभर्ट गर्ने गरेको छ ।
जनकपुरकी केही किशोरीहरु जो की काठमान्डौं पढन गएकी छिन्, वा गाउँबाट जनकपुरै गएकी छिन वा घरमै छिन् । टिकटक बनाउनको लागि बाहिर कति समय खेर फाल्छन भनेर यकिन छैन् । उनीहरु टिकटक बनाउनकै लागि काठमान्डौं जस्तो महँगो शहरमा विभिन्न लोकेशनमा पैसा खर्च गरी जान्छिन, तर फेक उपलब्धीले झन सोही दिसातिर लम्कँदै गएको देखिन्छन् ।
टिकटक र लव जिहाद
टिकटक प्लेटफार्ममा मैले माथि चर्चा गरेको एक भारतीय युवतिको से** भिडियो लव जिहादको ज्वलन्त उदाहरण थियो । त्यो भिडियो उनीहरुले आफै सुट गरेपनि आखिर टिकटकमा कसरी भाइरल बन्यो ? त्यो भिडियो दुई जनासँग मात्र थियो । यी युवति र युवकसँग । युवतिले त्यो भिडियो किन राख्ने ? त्यो युवक त्यो भिडियोपछि सम्पर्कविहिन भएको समाचार भारतीय सँचारमाध्यमहरुमा आएपछि लव जिहादको शिकार भएको थाहा पाएको बुझिएको छ ।
हो, नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा किशोरी, युवतिहरु लव जिहादको शिकार भइरहेकी छिन् । जनकपुरमै एक युवकले कैयौं किशोरी र युवतिसँग शारिरिक सम्पर्क राखी अन्त्यमा नाँगै फोटो खिचाएर पब्लिस गर्ने गरेको देखिएको छ । एक किशोरी होईन, एउटै युवकले ५/६ जना किशोरी र युवतिको एउटै पोजको फोटो खिचाएर राख्ने गरेका छन् । टिकटकबाट किशोरीलाई विभिन्न प्रलोभन दिने, फेमस हुने चाहनाले लव जिहादको शिकार हुँदै आएकी छन् ।
♬ original sound - Rajesh Rajesh
अहिले पनि टिकटकमा कैयौ किशोरी र युवतिहरु यस्तै लव जिहादको शिकार निरन्तर भइरहेकी छिन्, फेमस हुने उमँग र उमेरको चाहनाले उनीहरुलाई कहाँबाट कहाँ फँसाएको छ भनेर उनीहरुले आँकलन अझै गर्न सकेको छैनन भने उनको अभिभावकले त खासै ध्यान नै दिएको छैनन् ।
उमेरको प्रभावको कारणले पनि उनीहरु बढी फँस्ने गरिन्छ । उनीहरुलाई उत्तम निर्णय लिने क्षमता नभएर भलिभाँती फस्ने गरिन्छ । उनीहरुलाई सही गलतको केही ज्ञान नभएर अहमता, ईगोले पनि आफैं टिकटिकको दलदलमा फँस्ने गरिन्छ ।
टिकटकमा धेरै साकारात्मक भिडियोहरु पनि हेर्न पाईन्छ । परिवारिक भिडियो पनि धेरै हेर्न पाईन्छ । तर, केही भिडियोहरु त गलतीले सामुन्ने आए परिवारसँग बोल्ने हिम्मत पनि हुँदैन । यस्ता घटिया र नाकारात्मक कन्टेन्ट राखिएको हुन्छन् । ( Note :लव जिहाद कुनै धर्मसँग सरोकार छैनन्, यूज एण्ड थ्रो गर्ने प्रवृतिलाई लव जिहादको सँज्ञा मात्र प्रयोग गरिएको छ ।)
Mera mahbub Mera Sanamaraha hai ???? #happyholi #modelmultiplecollegejanakpur #forever #yadav_brand_no1 #fry #tiktokvideviral #trading
♬ original sound - ????Shruti_Byahut????
शून्य क्षमता, गुण र नाँगो प्रदर्शन
तराई मधेशकी केही युवतिहरुले टिकटकलाई अनलाईन आरकेष्ट्रा बनाएकी छिन् । उनीहरुले विभिन्न प्रकारले टिकटकका प्रयोगकर्तालाई अनलाईन मार्फत झुमाउने गरिएको देखिएको छ । जसमा अधिकाँश बढी धनी वर्गकी, धनी घर परिवारकी किशोरी युवतिहरु हुन्छन् ।
उनीहरुमा अभियनको जिरो गुण हुन्छन्, केही आउँदैनन मात्र १५ देखि ३० सेकेण्डसम्म हातखुट्टा घुमाईदिने र अभद्रे डान्स गरेपछि आफू सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भएको महसुस गर्छिन् । यति मात्र हो ।
तर, फेमस र भाईरल हुनका लागि कपडा फुकालेर, अन्डरवियर लगाएर भिडियो बनाउने गरिएको पनि देखिएको छ । टिकटक हो की पोर्न साईट त्यतिबेला छुटयाउन गाह्रो हुन्छ । र यसैलाई उनीहरुले आफ्नो क्षमता, गुण र क्रिएटिभिटी सोँचेर भिडियो बनाउने क्रम जारी राख्छन् । ( NOte : कपडामाथि कुनै टिप्पणी छैन, सबैको आ आफनो स्वतन्त्रता छ । नाँगो प्रदर्शनमाथि मात्र टिप्पणी गरिएको छ । )
जिरो बराबरका रोष्टरहरु -Rost
यति मात्र होईनन्, टिकटकमा त्यस्ता भिडियो हेर्नेहरुले रोष्ट पनि गर्ने गरेको छ । जसलाई रोष्टको रो पनि थाहा छैनन उनीहरुले रोष्ट गर्ने गरेका छन् । किशोर तथा युवकहरुले आफू रोष्टर किँग हो भनेर पनि दाबी गरिरहेका छन्, जबकी अनर्गल, असभ्य, अपशब्द बोलेर रोष्ट गर्ने गरिन्छ ।
र, टिकटकमा आउने स्टीच अप्सन खुल्ला राखी आफू फेमस हुने होडबाजी अझै कायम छ । उनलाई गाली गलौज गरी, जे पाए त्यही शब्द प्रयोग गरी भिडियो स्टीच गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता युवतिहरु जानीबुझेर स्टीच खुल्ला गरि राख्छिन, मकसद फेमस हुनु हो ।
झन केही युवकहरुले त कति हदसम्मको नाकारात्मक शब्दहरु राखेर जे पायो त्यही भिडियो बनाउने गरिएको छ । धनुषाकै एक युवक धीरुभाई भनेर आईडीमा राख्ने भिडियोको शब्द सुनेपछि उनको परिवारले कसरी सहन गर्न सकेको होलान भन्ने प्रश्न उठछ । तर, उनको फलोवर बढी छ । जो जतिको नाकारात्मक गर्छन, बढी फलोवर उनकै हुन्छन् । यद्ययी, राम्रो कन्टेन्ट दिनेको पनि कम फलोवर छैनन् ।
with prem chopra ????????#yadavrockstar❤️ #maithlirocks #hibhnemigoals???????? #foryoupage #ktm #siraha #vblove❤️❤️ @roaster_king793 @jaiswalmadhu0
♬ original sound - ♥️ Binu Yadav ♥️
वास्तविकता भन्दा अनभिज्ञ
यही जिन्दगी हो, यसरी बलिवुडमा गईन्छ, फेमस भईन्छ , मान्छे चिन्छन् भन्ने एक होडबाजी छ । मान्छे त चिन्नलाई पोर्न स्टार सनि लियोनी, मिया खालिफालाई पनि चिन्छन् । एक पटक त विश्वमै सबभन्दा बढी सनि लियोनी गुगलमा सर्च गरियो भनेर तथ्याँक थियो । तर, उनीहरुले रामायणमै भएपनि जस्तोसुकै कर्मठको भूमिका निर्वाह गरेपनि मान्छेलाई उनलाई गलत नजरले नै हेर्छन् । जतिसुकै सति सावित्रिको रोल गरेपनि उनलाई हेर्ने नजरिया भने मान्छेको एक पोर्न स्टारकै हुन्छ ।
त्यसरी नै टिकटकमा चर्चामा आउने खोज्ने युवति, किशोरी, किशोर युवाहरुले जे जति फलोवर, लाईक कमेन्ट पाएपनि यीनीहरुलाई हेर्ने नजरिया भने सधैं नाकारात्मक नै हुन्छ । जति सफाई दिएपनि, जतिको सति सावित्री र राजा हरिशचन्द्र बन्न खोजेपनि यीनीहरुलाई हेर्ने नजरिया समाजको त्यही हुन्छ । समाजले जे हेर्छ त्यही बोल्छ । समाजको हेर्ने नजरिया होईन, उनीहरुले समाजलाई पस्कने भिडियो, कन्ेटन्ट, समाग्री नै बदल्नु आवश्यक छ ।
यीनीहरुलाई यो थाहा छैनन की यीनीहरु जिरो हुन, केही आउँदैनन, त्यतिकै लिप सिँगीँग गर्ने, त्यतिकै १० सेकेण्ड नाच्ने, मुखभन्दा पनि ठुलो चश्मा लगाएर, फाटेको पैन्ट, अर्ध नग्न भएर भएपनि भोजपुरीमा बहियामे कसिके सैयाँ– “मारेला कचाकच कच कच”
♬ original sound - SK Nepal????????
टिकटकमा समाज मात्र होईन, धर्म नाश, सँस्कृति विनाश पनि उत्तिकै भइरहेको पाईन्छ । समाजले यसको हिसाब किताब अवश्य गर्नेछ । समाजले उनीहरुलाई अहिलेदेखि घृणा सुरु गरिदिएको छ । जति सफा भएपनि उनीहरुले आफ्नो इमेज पुनः बनाउन गाह्रो हुन्छ र अन्त्यमा गर्ने भनेको आत्महत्या हो ।
आग्रहः यदि यो लेख तपाईले अन्त्यसम्म पढनुभएको छ भने आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर SHARE गर्नुहोला, तपाईको एक शेयर SHARE ले उनीहरु गलत लत्तबाट उम्कीन्छ की ?
लेखमा लेखकको स्वतन्त्र विचार मात्र हो ।
नोटः लेखमा प्रयोग गरिएको भिडियोहरु टिकटक प्लेटफार्मबाट लिँक गरिएको छ । कसैलाई होच्याउने वा देखाउने उदेश्यले नभई मात्र टिकटकबाट केही भिडियोहरु उठाएर राखिएकोले अन्यथा नहोस् । हाम्रो उदेश्य कसैलाई होच्याउने वा तल देखाउने होईन् । टिकटकमा राखिने समाग्रीलाई उदाहरणको तौरमा प्रस्तुत गरिएको छ ।